Iyi ndiyo rutsigiro rweUrvoi kudzoreredza iyo Apple Watch | Ndinobva mac
Uku ndiko kutsigira kweUrvoi kudzorerazve Apple Watch
Zvekare zvakare isu tinotsigira rutsigiro urwo iwe uchakwanisa kukwidzirazve yako Apple Watch. Haisi charger iyo yakagadzirirwa kuitisa iyo Apple Watch Ukangoburitsa mubhokisi asi kare isu tichafanirwa kuisa induction yekuchaja tambo yeApple Watch yedu mukati.
Saka isu tine icho icho chitsigiro chakagadzirwa chepurasitiki chine chimiro chakanyanya kuziva uye icho chichatibvumidza isu kuve nacho patafura yemubhedha, semuenzaniso, kuApple Watch yedu patinenge tichiichaya.
Iyo Urvoi rutsigiro ndiyo inomira-base iyo inotibvumidza isu kuchengetedza yedu Apple Tarisa zvakachengeteka patafura kana patafura yemubhedha patinogona kuishandisa sechaja sezvo tichigona kuwana yayo induction yekuchaja tambo mukati. Iri kutengeswa nemaviri mavara, nhema uye chena uye mashandisiro ayo ari nyore kwazvo.
Rutsigiro inokodzera zvese 38mm uye 42mm modhi Uye sezvaungaona mumufananidzo, inogona kutenderedzwa, saka kana tikarongedza chikamu chepazasi netepi ine mativi maviri kune tafura yemubhedha, tinogona kuitenderedza sezvo chikamu chepamusoro chichifamba. Ichokwadi ndechekuti iri sarudzo yakanaka kwazvo uye mutengo wayo haupfuure gumi euros.
Unogona kuiwana mu next link iri rechitoro chinozivikanwa online chekutenga AliExpress. Iwe unofungei nezve iyi nyowani yekutsigira sarudzo yeApple Watch? Ndiri kuzopa shamwari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Uku ndiko kutsigira kweUrvoi kudzorerazve Apple Watch
MyBrushes - Penda, Dhonza, Sketch, inowanikwa isingasviki euro imwe
Aya ndiwo maitiro aunogona kunyorera tsvimbo ye USB mune macOS Sierra